Nnwom 31 NA-TWI - Onyankopɔn mu gyidi mpaebɔ - Mereba - Bible Gateway
Nnwom 30Nnwom 32
Nnwom 31 Nkwa Asem (NA-TWI)
31 Mereba wo nkyɛn, Awurade, ama woabɔ me ho ban, na mma wonnni me so nkonim. Woyɛ Onyankopɔn treneeni. Mesrɛ wo sɛ gye me nkwa! 2 Tie me! Gye me nkwa mprempren! Yɛ me guankɔbea na bɔ me ho ban na gye me nkwa. 3 Woyɛ me guankɔbea ne me hwɛfo. Kyerɛ me kwan na di m’anim sɛnea woahyɛ me bɔ no. 4 Gye me fi firi a wɔasum me no mu. Bɔ me ho ban fi amane mu. 5 Mede me ho hyɛ wo hwɛ pa ase. Wubegye me nkwa, Awurade,woyɛ ɔnokwafo Nyankopɔn. 6 Wukyi wɔn a wɔsom anyamehunu, enti mede me ho to wo so. 7 M’ani begye na madi ahurusi esiane wo dɔ a wodɔ me daa nti. Wuhuu m’amanehunu; wunim me haw. 8 Woamma m’atamfo ankyere me; woama mitumi kɔ baabiara a mepɛ.